Sacuudiga oo Iiraan kula jira baratan dhanka Nuklearka ah – Kasmo Newspaper
Updated - February 23, 2018 12:27 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Sacuudiga ayaa la sheegayaa in uu ku tala jiro sidii uu u noqon lahaa dalka soo socda ee Bariga Dhexe ku yaalla oo yeesha Nuklearka, ujeeddaduna waxay tahay dhismaha 16 Mashiin (Reactor) oo ay ku baxayso 80 Bilyan, ilaa sannadka 2030ka.
Sida uu qorayo wargayska Wall Street Journal, Boqortooyadu waxay qarka u saarantahay in ay heshiis la gasho Maraykanka, wada hadalladuna waxay bilaaban doonaan bilaha dhow ee soo socda.
Arrintaan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo xaruntii u horreysay ee Nuclear ah oo Dunida Carabta laga hirgaliyo, agagaarka Abu Dhabi,ku dhowdahay gabagabo, taas oo ay Shirkad Kuuriyada Koofureed ah ku dhisayso farsamada Maraykanka.
Oggolaanshaha Washington wuxuu ku yimid oo loo cuskaday heshiiska ‘123 Agreement’ oo ah qodobka ‘US Atomic Energy Act’ ee habeeya macaamilada Maraykanka iyo dalalka kale dhinaca Nuclearka.
Maaddada Uranium-ka ayaa la soo galinayaa dalka UAE, laakiin laguma bacriminayo halkaas, sidaas oo uuan jeclayn Sacuudiga, oo doonaya in uu khayraadkiisa Tamarta kala soocdo, isaga oo daba maraya shuruucda adag ee Maraykanka.
Mid ka mid ah damaca Amiir Maxammd Bin- Salmaan, ayaa ah in uu tartan la galo cadawgiisa taariikhiga ah ee Shiicada Iiraan, oo ay isku hayaan arrimaha Gobolka. Heshiisku wuxuu Marakanka ugu fadhiyaa qiime maaliyadeed oo sare, Aqalka Cadna wuxuu qiimayn ku hayaa sidii saaxiibka Sacuudiga looga khafiifin lahaa shuruucda xakamaynta Nuclearka.
Laakiin dariiqaasi halis badan ayaa Washington uga imaan karta, mar haddii oggolaansho Sacuudiga la siiyo ka dhigayso dhib sidii Tehran loogu giijin lahaa xayiraadaha.
Dhanka kale heshiis noocaan ah, sida Wargayska The Economist qorayo, wuxuu ku riixi karaa dalal kale, sida UAE, in ay mid la mid ah codsadaan, halka guud ahaan uu xagaldaacinayo dadaalka Beesha Caalamka ee xakamaynta Nuklearka ( Non Proliferation).
Baratanka Russia iyo China uga jiraan daaha gadaashiisa waxay Trump galin karaan damac uu Sacuudiga kula galo heshiis si uu ugu daneeyo Wax soo saarka Warshadaha Nuklearka Maraykanka.
Laakiin wali lama ogaan karo haddii 2da dal ka dhabayn doonaan heshiiska, kaas oo horjoogsi uga iman karo Congress-ka iyo Israel oo, in kasta oo Nuclear haysato, aan oggolayn dal kale oo Gobolka ah oo isagana yeesha.